Size: 16 x 5 x 14cm, na fanaingoana
Ny kitapo fanampiana voalohany dia namboarina tamin'ny refy 16x5x14cm, mora be raisina sy entina amina hetsika eny ivelany (fitsangatsangana sy fitobiana), fiara, toeram-piasana, birao na trano.
ny fananganana ao anaty dia hahatonga fandaminana mora ho an'ny fitaovanao fanafody / vonjy taitra.
Azontsika atao koa ny manonta ny logo anao amin'ny vatanao, na manjaitra marika ao anatiny.
Manana tolotra OEM & ODM hatolotra izahay, hamolavolana habe, fitaovana, loko, fananganana anaty isan-karazany, azafady mba mifandraisa aminay azafady.
Ity vokatra ity dia natao ho an'ny kitapo ihany, tsy tafiditra ao ny fitaovana fanampiana voalohany ao anatiny.
Manaraka: Boaty fitahirizana sarontava
Kitam-panampiana sock Certification Ce
Kitapo fanampiana soja avo lenta
Kitapo fanampiana vonjy taitra voalohany
Kitapo vonjy taitra vonjy taitra fitsaboana fiara
Kitapo fitsaboana voalohany
AIDA VOALOHANY KIT FB004